कोरोना भाइरस संक्रमण के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? » Gurkha Radio- गोर्खा रेडियोGurkha Radio- गोर्खा रेडियो
/ ४ चैत्र २०७६, मंगलवार १६:२० प्रकाशीत
डा. राघबप्रसाद धिताल
बेलायतमा यो संक्रमण र मृत्युदर आक्रामक रुपमा बढ्दो छ । यसै सिलसिलामा बेलायतमा लामो समयदेखि कार्यरत एकजना चिकित्सक तथा बरिष्ठ जीपी डा.राघवप्रसाद धितालसँग नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखाको पहलमा यो जानकारीमूलक सामग्री तयार पारिएको हो ।
ज्वरो आएको छ, रुघा खोकी, फ्लूकोजस्तो लक्षण देखिएको छ भने कहाँ सम्पर्क गर्ने ? कसरी सुरक्षित रहने?
जीपी र एनएचएसमा कसरी सम्पर्क गर्ने ? भाषाको समस्या भएमा र टेलिफोन इन्टरप्रेटरका लागि कहाँ र कसरी सम्पर्क गर्ने?